Sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada Puntland oo la dilay | KEYDMEDIA ENGLISH
Sarkaal hore uga tirsanaa ciidamada Puntland oo la dilay
Sarkaal ka tirsanaa ciidamada maamulka Puntland, ayaa maanta lagu dilay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari.
BOSAASO, Soomaaliya- Kooxo bistoolado ku hubeysan ayaa barqanimadii maanta gudaha magaalada boosaaso ku dilay sarkaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada maamulka Puntland.
Sarkaalkan la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Barkhad Maxamed Jaamac, waxaana dilkiisa uu ka dhacay agagaarka suuqa magaalada Boosaaso.
Waxaa baxsaday kuwii ka danbeeyey dilka sarkaalka, iyadoo ay goobta gaareen ciidamo ka tirsan, kuwa booliska Puntland oo sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku raadinayaan, dableydii dilka gaysatay.
Sarkaalka maanta lagu dilay Boosaaso ayaa hore u soo noqday Taliyihii Kontoroolka Boosaaso, waxaana muddo sanad ka hor shaqada ka eryey Saciid Deni, sababo aan si rasmi ah loo hubin.
Ilaa iyo hadda ma jirto, cid sheegatay masuulyada dilka askarigan, hase ahaatee, Kooxaha Daacish iyo Shabaab, oo saameyn badan ku lahaa sanadihii ugu danbeeyey deggaanada Puntland, ayaa fuliya weerarada noocan oo kala ah.